China Direct Line sevhisi uye mumiririri | Sunson
Nekushandira pamwe neHongkong yakagadzikana nendege masosi uye anotungamira epasi anotakura zvinhu munyika dzeEurope neUS, SunsonExpress Direct Line mubatanidzwa wekuratidzira uye wepositi sevhisi muDDP (Zivisa Duty Paid) maitiro. Isu tinoshandisa yakananga kutiza kubva kuHongkong kuenda kune yekuenda gedhi zuva rega rega uye tinobata iwo iwoyo iwoyo tsika chibvumirano. Iyo 100% yakazara inodzora pamhepo nendege uye yekupedzisira mamaira kuendesa inowanikwa inova mhinduro yehupfumi nekukurumidza kuendesa izvo zvinonyanya kugadzirwa kwe e-commerce mapakeji.
Kutumira Kuzadzikiswa Kubva China KuBrazil
Mutsara wakakosha weSunson weBrazil unosanganisa yepamusoro-soro Hong Kong zviwanikwa zvekubhururuka neBrazilian postal service, inova sarudzo inodhura yekutumira kuBrazil. Inoita mushe zvine chekuita nekufambisa nekumhanyisa rate, uye pasuru yacho inogona kuteverwa mune ese maitiro. Ndiyo sarudzo yakanakisa yekutumira kuBrazil.
Kodhi yebasa Nguva yekufamba
(mazuva ekushanda) Zvinhu zvakagamuchirwa Inoshanda yakaziviswa kukosha
BR-CHEMA 10 ~ 20 Kutumira kwese
mvura & make-up kutumira Yakataurwa kukosha ＜ 50USD haibvumirwe pabasa uye VAT
Kutumira Kuzadzikiswa Kubva kuChina Kuenda kuUnited States
Kuti ugutsikane vatengi nekukurumidza uye isingadhuri nzira dzekufambisa kubva kuChina kuenda kuUnited States, Sunson's US Line inosanganisa mhando yepamusoro yekutumira zviwanikwa muInstland China neHong Kong, pamwe neDHL neUSPS terminal yekuendesa uye nekukurumidza masevhisi ekuregedza tsika mu United States, iyo inovandudza zvakanyanya nguva yekufambisa uye inoderedza Mutengo wekufambisa, ruzivo rwekutevera rwunowanikwa mushure mekunge odha yaiswa, uye maitiro ese anoteedzerwa. Inogona kugamuchira bhatiri zvigadzirwa uye emvura zvigadzirwa. Iyo yakakodzera kutakura yakakwira-kukosha uye zvigadzirwa zvenguva-zvinonzwisisika.
US-TAURA 9 ~ 14 Kutumira kwese
mvura & make-up kutumira Yakataurwa kukosha ＜ 800USD haibvisirwe pabasa uye VAT
Kutumira Kuzadzikiswa Kubva China KuIsrael
Sunson's Israel yakakosha mutsetse inosanganisa yemhando yepamusoro Hong Kong zvekufambisa zviwanikwa uye yemuno kuratidza sevhisi muIsrael. Mutsara wakagadzikana. Mushure mekusununguka, iyo yekutevera nhamba inopihwa nekukasira. Iyo yose nzira yekutevera inovimbiswa. Mutengo wakanaka uye mutengo wekutakura wakakwira. Kukupa iwe nekukurumidza uye kwakapfuma ruzivo rwekufambisa, unogona kugamuchira zvigadzirwa zvebhatiri, zvigadzirwa zvemvura, ndiyo sarudzo yako yakanakisa kubva kuChina kuenda kuIsrael.
Kutumira Kodhi Nguva yekufamba
IL-Express 10 ~ 15 Kutumira kwese
mvura & make-up kutumira Yakataurwa kukosha ＜ 75USD haibvisirwe pabasa uye VAT
China KuBrazil Direct Lines
Mhando dzePost Service Yakanangana Lines Express